I-Swann Yesimanje @Serenbe (Inqola Yegalofu Enobungani)
(KUBALULEKILE - BONA IPROTOCOL YOKUHLANZA I-COVID-19 NGAPHANSI "Kwesikhala") I-Swann Yesimanje iyindawo ekahle yokuhlala e-Serenbe - ifaka YONKE INTO ongayidinga noma ongayicela! Itholakala kalula eSwann Ridge Hamlet yaseSerenbe, ingaphakathi kwebanga lokuhamba (noma ukugibela igalofu elifushane) ukuya kuyo yonke imicimbi + ekhangayo enikezwa nguSerenbe. Jabulela ukulungisa ukudla ekhishini labapheki bangempela, jabulisa izivakashi zakho endaweni eyimfihlo yangaphandle enechibi lokubhukuda, ubhavu oshisayo, indawo yomlilo yangaphandle, nokunye okuningi.
Yakhiwa ngo-2016, i-Modern Swann yakhiwe ngokugxila kwezempilo kanye nokusimama. Umgomo wethu kwakuwukukhiqiza ikhaya elinempilo elinomthelela ophansi kwezemvelo elakhiwe ngezinto zokwakha kanye nemikhiqizo ehlangabezana noma edlula Amazinga e-California CARB. Ngedizayini yomqondo ovulekile kanye nesakhiwo, ikhaya libonisa imininingwane yezakhiwo ehlukahlukene kanye nezici kuyo yonke indawo kanye nokuqedwa okwengeza isici esiphelele sesimanje nesihlanzekile sesikhala. Jabulela ukuzijabulisa nokuvakasha nomndeni nabangane ngesikhathi sokuhlala kwakho okulandelayo e-"The Modern Swann @ Serenbe".
QAPHELA: Izinja eziziphethe kahle neziqeqeshelwe ezindlini (ezinezinzipho ezisikiwe) zamukelekile ngesivumelwano esengeziwe sesilwane esifuywayo kanye nenkokhelo ezoqoqwa ngokuhlukene neqashiswayo ngo-$25/ubusuku ngesilwane sokuqala esifuywayo ($15/ubusuku bezilwane ezifuywayo ezengeziwe).
Uma usuyigcinile indawo, uzothola umlayezo ocela ikhodi enamadijithi amane eyingqayizivele, ozoyisebenzisa ukuze ufinyelele kuleyo ndawo ngesikhathi uhlala!